I-Admissions ye-UCLA: Izikolo ze-SAT, Uncedo lwezeMali kunye nokunye
Uhlolo lwee-Admissions UCLA:
Ngomlinganiselo wokwamkela u-18% ngo-2016, u-UCLA unamkelwa okukhethiweyo kwaye unye yezona ziko zikarhulumente ezikhethiweyo kakhulu kwilizwe. Uninzi lwabafundi abavunyelweneyo banamabanga kwi-"A", kwaye i-SAT kunye ne-ACT izikolo zivame ukuba ziphezulu ngaphezu komyinge. Iyunivesiti inokubakholiswa ngokubanzi, ukubandakanyeka kokusebenza kwangaphandle kunye nokuphumelela iincwadana zesicelo se-UC kunokukunceda ukuphucula amathuba akho.
Isilinganiso sokwamkelwa kwe-UCLA: 18%
UCLA GPA kunye neGraphic Score Graph
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 570/710
ISAT Math: 590/760
Isilinganisi samanani ephakamileyo yeyunivesithi ye-SAT
UMTHETHO WOMTHETHO: 28/33
UMTHETHO IsiNgesi: 28/35
UMTHETHO UMathe: 27/34
Iyunivesithi ephakamileyo ye-Yunivesithi yomthetho
Kutholakala kumahektare angama-419 eLos Angeles 'iWestwood Village iikhilomitha eziyi-8 ukusuka kwiLwandle lwasePacific, iUCLA ihlala kwisiqwenga sexabiso eliyinhloko. Ngamaziko angaphezulu kwama-4 000 okufundisa kunye nama-25 000 abafundele iidanga, iyunivesiti inendawo enezemfundo ezikhuselekileyo nezizimeleyo. Amandla kwezobugcisa obunobuninzi kunye nezesayensi athola i-UCLA isahluko sePhi Beta Kappa , kwaye amandla ophando ayifumene ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika.
I-UCLA inxalenye yenkqubo yeYunivesithi yaseCalifornia , kwaye ibonakala njengenye yeyunivesithi zikarhulumente eziphambili kwilizwe. Akumangalisi ukuba u-UCLA wenza iindidi zam zeekholeji zaseKalifornia nakwiikholeji eziphezulu zaseNtshona . Ngaphambili kwezemidlalo, i-UCLA Bruins ukuncintisana kwiCandelo le-NCAA I- Pacific 12 INgqungquthela .
Imimandla yeyunivesithi 21 yezemidlalo.
Ubhaliso lwabonke: 43,548 (30,873 abagqwesileyo)
Isifundo kunye neMali: i-$ 12,920 (kwi-state); $ 39,602 (ngaphandle kwe-state)
Iincwadi: $ 1,636 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 15,069
Ezinye iindleko: $ 4,431
Intlawulo Iyonke: i-34,056 i-$ (kwi-state); $ 60,738 (ngaphandle kwe-state)
UCLA Financial Aid (2015 - 16):
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: 64%
Izibonelelo: $ 19,693
Imali: $ 6,314
I-Popular Majors: I- Biology, iBusiness, Economics, isiNgesi, iMbali, iNzululwazi, iNzululwazi, iNzululwazi
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 96%
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka-4: 74%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 91%
Imidlalo Yezemidlalo: Iqonga leMidlalo, iMidlalo yeManzi, Ibhola, Umkhondo kunye neNkundla, iBhola, iBhola yeBhola, iGalofu, iTennis, iLizwe eliPhambukayo
Imidlalo yabasetyhini: I- Gymnastics, Ukukhwela, iNgcahla, I-Softball, iVolleyball, I-Track and Field, Izwe eliphambeneyo, Ukubhukuda
Izikolo Unokuthi Unomdla Kwangaphandle kwe-UC System:
I-CSU eLwandle olude: iProfayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
Isitatimende semfundiso ye-UCLA:
Jonga i-mission epheleleyo ye-mission kwi-http: //www.ucla.edu/about/mission-and-values
Injongo ephambili ye-UCLA njengeyunivesithi yophando yoluntu yindalo, ukusabalalisa, ukulondolozwa nokusetyenziswa kolwazi lokuphucula uluntu lwethu jikelele. Ukuzalisekisa le mishini, u-UCLA uzibophezele kwinkululeko yemfundo ngokwemigqaliselo yayo epheleleyo: Siyakuxabisa ukufikelela okuvulelekileyo kolwazi, ingxoxo ekhululekileyo nevukisayo eyenziwe ngokuhlonelana ngabantu ngabanye, kunye nokukhululeka kokungahloneli. Kuzo zonke izinto esizenzayo, sizama ngokukhawuleza ukugqwesa kunye nokwahlukana, ukuqonda ukuba ukuvuleka nokubandakanywa kuvelisa umgangatho ofanelekileyo. Ezi zithethe zixhomekeke kwiimbopheleleko zethu zesikhungo.
I-Admissions yeeKholeji zaseBryn Mawr
Eziyimfuneko 'ii-albhamu ezingama-R & B ne-Soul Soul
100 Iimpawu ezihle kakhulu zeOxymorons
I-12 Imele-Yabona iiFilimu zeDVD
Yiyiphi ihlobo lobusika (ekhethiweyo) Imithetho?
I-Cosmos Isiqendu 10 Ukujonga iphepha lokusebenzela